Inbound Marketing na Oru ohuru ohuru | Martech Zone
Mgbe m na-akwado ikwu okwu na Cincinnati n'izu a, achọrọ m ịnye ọhụụ mara mma nke kwuru maka otu ọchụchọ na mgbasa ozi mmekọrịta gbanwere usoro ahịa. Nke a bụ ihe m na-akpọ Oru ahia ohuru:
Ọ bụbu na ndị na-ere ahịa na-achịkwa akara na izi ozi na ntanetị, chọrọ ka ndị ahịa na azụmaahịa lelee ngosipụta, lelee ozi broshuọ ma mesịa gwa onye na-ere ahịa okwu. N'oge ahụ, ọ dịbeghị mkpebi ha zụtara. Onye na-ere ahia ahụ nwere ike ịba ụba dị egwu na-agbanwe atụmanya ahụ ma mechie ọrịre ahụ.
Site na ọbịbịa nke mgbasa ozi mmekọrịta na engines ọchụchọ, ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa abụghị naanị nyochaHa dị ugbu a renyocha. Nke a pụtara na atụmanya ahụ dị njikere nke ọma na ụlọ ọrụ gị, ngwaahịa gị, ọrụ gị, otu obi si atọ ndị ahịa gị ụtọ maka gị, ọbụnakwa nwee mkpebi tupu ha na ndị ahịa gị jikọrọ aka.
Ghọta nke a dị oke egwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ihe nke ọma inbound ahịa na-eduga:
Otu mmejọ m na-ahụkarị bụ ụlọ ọrụ na-ebupụta saịtị mega nwere ọtụtụ ozi na ha na-enye ndị ahịa ohere ịhapụ gị. Mee ka saịtị gị dị mfe, mee ka ozi gị dị mfe ma mee ka ndị mmadụ nwee mmasị ịmata ihe ga-eme maka ekwentị, lelee ngosi ma ọ bụ budata akwụkwọ akụkọ.
Ọ bụrụ na ị na-emikpu miri emi n'ime onyinye gị site na ngosi, akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ ihe ọmụmụ… mgbe niile, mgbe niile, na-achọ onye ọbịa ka ọ debanye aha tupu ịme nzọụkwụ ọzọ. A na-eji ndị mmadụ azụ ahịa ozi kọntaktị ha iji nweta ozi ha chọrọ. Ndị na-ewere usoro ọzọ ahụ kwesịrị ka akpọtụrụ dị ka onye ndu ruru eru.
Hụrụ ndị ahịa nwere ọgụgụ isi na ndị nwere nnukwu mkpali. Ofbọchị nke cheesy, onye na-ere nrụgide dị elu agafewo. Mgbe onye na-ere ahia buliri ekwentị, ha na-ezutekarị onye na njedebe nke ahịrị nke maara azụmahịa ha. Mgbe ụfọdụ, ha na-aghọta ya karịa onye na-ere ahịa! Mụ na ụlọ ọrụ ka na-arụ ọrụ wee na-anọdụ ala na ịkpọ oku ha dịka ọkachamara n'okwu gbasara isiokwu, oge ụfọdụ ọ bụ ihe dị iche.
Leverage technology ya kacha. Ọ bụrụ n'ịghọta etu ndị ọbịa na-agagharị iji banye na saịtị gị, ịnwere ike itinye ozi izizi ha. Ọ bụrụ na ọ bụ ọchụchọ, isiokwu dị iche iche na mkpọsa dị iche iche kwesịrị ịkpalite oku dị iche iche na ibe. Ọ bụrụ na ọ bụ Twitter, ị nwere ike ịchọkwu mkparịta ụka. Ọ bụrụ na ọ bụ LinkedIn, ndị ọkachamara na-abịaru nso. Site na ọganihu VOIP na telephony, ọ ga-ekwe omume ịkpọ ekwentị dị iche iche site na isi mmalite dị iche iche.
Ma ọ dịkarịa ala, malite ile anya na ịchọta ụzọ dị iche iche dị iche iche ị ga-esi banye na azụmaahịa gị. Ma ọ bụ Ozi Ntuziaka ma ọ bụ mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa, ị ga-enwerịrị ụzọ ị ga-esi tinye aka iji bulie ọnụego mgbanwe.
Tags: ohuru ahia ohuruịzụta mkpebiresearchụlọ nkwonkwo ahịandozi mgbasa ozi
Sep 29, 2009 na 11: 53 AM
"Ma ọ dịkarịa ala, malite ile anya na ịdebe ụzọ dị iche iche dị iche iche nke na-atụ anya ịbanye na azụmahịa gị"
Kedu ihe eji eme ihe a? Nchịkọta Google? Uzoigwe6? Visistat? Ana m achọkwu ụzọ iji soro.
Sep 29, 2009 na 8:50 PM
Malite na nchịkọta bụ ihe dị mma iji hụ ihe isi mmalite ndị ahụ na-enye okporo ụzọ na saịtị gị. Ọbụna id ka mma na-eme nyocha na ebe enwere ọtụtụ akpa nke okporo ụzọ dị mkpa - enwere ike ịme site na nyocha ọchụchọ (naanị na-eso onye a họpụtara maka isiokwu!).